မှတ်ချက်။ ။ယခုပို့စ်ကို Mobile Service ကို စိတ်ဝင်စားသူများသာဖတ်ရန်... - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Mobile Tutorials မှတ်ချက်။ ။ယခုပို့စ်ကို Mobile Service ကို စိတ်ဝင်စားသူများသာဖတ်ရန်...
မှတ်ချက်။ ။ယခုပို့စ်ကို Mobile Service ကို စိတ်ဝင်စားသူများသာဖတ်ရန်...
Thiha Htike at 8:59:00 PM Mobile Tutorials,
အရင်းဆုံးတောင်းပန်ပါတယ် because မေးထားတာများ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ မတင်နိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် ..
နောက်တစ်ချက်က စိတ်မကောင်းပါဘူး because မေးမြန်းတဲ့နေရာမှာ Message ပို့ပြီးမေးတဲ့သူများအတွက် Message နဲ့ပြန် Reply မလုပ်နိုင်တာကိုပါ due to Bill မရှိ .. :D
အခုပို့စ်လေးကတော့ Mobile Service လုပ်ရန်အတွက် Service Tool လေးတွေတင်ပေးမှာကြောင့်ပါ
Lock Reset Tool
Samsung Lock Reset Tool
Samsung Android Devices တွေအတွက် Pattern Lock , Password , Gmail စ,တာတွေကို Root မလို Debug On မလို , Data တွေ ဆုံးရှုံး စရာမလိုပဲ အလွယ်တကူဖြုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ Tool လေးပါ... အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်...။ Android Version 2.xx ကနေ 4.xx ထိ အလုပ်လုပ်ပါတယ်..။
တကယ်လို့ ဒီ Tool လေးကို ကွန်ပျူတာမှာ Run မရဖြစ်နေရင် စက်မှာတင်ထားတဲ့ Antivirus ကို ခဏပိတ်ပေးပြီးမှ Run ပါ...။
One Click Pattern Crack No Root Required - No Usb Debug Needed !!!
One Click Password Reset No Root Required - No Usb Debug Needed !!!
One Click Pin Reset No Root Required - No Usb Debug Needed !!!
All Without User Data Loss
This was test made on Samsung Galaxy y
should work on all samsung models
Android 2.x.x (Tested some Models)
Android 4.x.x (Tested Some Models)
and do job
Note : If exe not works properly just disable your antivirus and open again.
Android Device တွေက Pattern Lock , Password တွေမေ့သွားလို့ မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင် အလွယ်တကူ ဖြုတ်ပြစ်နိုင်ပါတယ်...
မိမိဖုန်း Setting မှ USB Debugging ကို Enable ပေးထားရပါ့မယ်.. ဒီအဆင့်ကို များသောအားဖြင့် Root ဖေါက်ထားတဲ့ ဖုန်းတိုင်း ON ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါလေးကို Android ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း On လုပ်ထားကြစေချင်ပါတယ်... ဖုန်းမှာ USB Debugging ကိုအမြဲ ဖွင့်ထားပါ။
USB Debugging ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်..။
Android Version 2.3.x တွေမှာဆိုရင် Setting > Application > Development ကတဆင့် USB debugging ကို Check လုပ်ပြီး On ထားနိုင်ပါတယ်။ ICS(4.0.x) နဲ့ Jelly Bean(4.1.x) တွေဆိုရင်တော့ Setting > Developer options ကတဆင့် USB debugging ကို On ထားနိုင်ပါတယ်... အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Firmware ကျသွားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ခုလို Pattern Lock / Pin / Password Lock တစ်ခုခုကျသွားတဲ့ပြဿနာမျိုးကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ဆိုင်သွားစရာမလိုပဲ ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မှာပါ..။
အရင်ဆုံး မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ Driver ရှိရပါမယ်... လိုအပ်တဲ့ USB Driver တွေကို ဒီနေရာ ကတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ Driver ကို ဒေါင်းယူပြီး Install လုပ်ပါ.. ။
ပြီးရင် ဒီ Shuame ဆိုတဲ့ Root Tool ကို ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ..
(ဒီ Tool လေးက Root ဖေါက်နိုင်တဲ့အပြင် တခြား အသုံးဝင်တဲ့ Feature တွေလည်းအများကြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်.. Android Devices ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Root Tool လေးပါ)
လိုအပ်တဲ့ Driver လည်း Install ပြီးပြီ ဆိုရင် Shuame Root Tool ကို Run လိုက်ပါ... Pattern Lock,Password မေ့နေတဲ့ ဖုန်းကို USB Cable ကတဆင့် ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ... ကျန်တာတွေကိုတော့ အောက်က ပုံလေးတွေထဲအတိုင်း နံပါတ် အစဉ်လိုက် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။(ပုံသေးနေရင် ပုံကို Click လိုက်ပါ)
အားလုံးပြီးရင် Pattern Lock , Password မေ့နေတဲ့ ဖုန်းကို ကြိုက်သလို ဆွဲ လိုက်ပါ... ပြန်ပွင့်သွားပါပြီ..။
အပေါ်ကနည်းအတိုင်းပဲ PIN Password ကိုလည်း ဖြုတ်ပြစ်နိုင်ပါတယ်...။
ဒါကတော့ USB Debugging ကို ON မထားမိဘူး Root လည်းဖေါက်မထားတဲ့ Android Device တွေအတွက်ပါ.... အောက်က Tool လေးနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်..။ မြန်မာ Developer ကို Psychist Naing Lynn ရေးထားတဲ့ Tool လေးပါ..။
USB Debugging On ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ Pattern Lock များကိုဖြုတ်နိုင်တဲ့ Tool လေးပါ... ဒီ Tool လေးကိုရေးသား ဖန်တီးသူကတော့ ကို Psychist Naing Lynn ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Ace,Huawei y511, g520 g525 auxv920 နဲ့ Huawei တော်တော်များများမှာစမ်းသပ်အောင်မြင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဖုန်းတော်တ်ာများများမှာလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
File Password က nainglynn ပါ။
အသုံးပြုနည်းကတော့ ဖုန်းကို Recovery Mode ကို ဝင်ပါ.... USB Cabel မှ တဆင့် ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ပါ ...ပြီးရင် ဇစ်ဖိုင်ထဲက AndroidSystemTool .bat ကို Run ပါ။ Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာရင် Pattern Lock ပျက်သွားပါပြီ .... ကွန်ပျူတာ, ဖုန်း တွေ မတူနိုင်တဲ့အတွက် တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ အဆင်ပြေချင်မှပြေပါလိမ့်မယ်။
Myanm Font Tool
MPPG က ကိုဖြိုးညီညီရေးတဲ့ Huawei Sony Samsung ၃မျိုးကို မှန်ကန်စွာ မြန်မာစာထည့်ပေးမယ့် 3in1 Font Tool လေးဖြစ်ပါတယ်။ 4.4.2 ထိ Support ရနိုင်ပြီး ဘယ်ဖုန်းကဘယ်ဟာနဲ့ချိန်းရ တယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် Tool တစ်ခုတည်းကနေ သူဖာသာသူထည့်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. PC နဲ့သုံးရ မှာဖြစ်ပါတယ်..
Credit : Phyo Nyi Nyi
For Root Tool
Huawei ဖုန်းတွေကို Firmware တင်နည်းနောက်တစ်နည်းပါ …ဒါကတော့ Firmware
ပျက်နေတဲ့ဖုန်းတွေမှာ SD card Slot ပျက်နေရင် firmware ပြန်တင်ရခက်ပါတယ် …
ဒါကြောင့် Tool နဲ့တင်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရင်ဆုံး Flash Tool ကို
ပြီးရင်တော့ Zip ဖြည်ပြီးရင်တော့ ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ NewMultiDownloadU လေးကို run ပေးပါ
Password တောင်းလာခဲ့ရင် Huawei လို့သာပစ်ထည့်လိုက် ….H ကို စာလုံးကြီးနဲ့ ရိုက်ထည့်ပါ
အပေါ်ဆုံးက Allow Upgrade …… ဆိုတာကြီးကို ဘာမှာလုပ်စရာမလိုပါ လုပ်ရမှာက
Please Select File ဆိုတဲ့ အပိုင်းပဲ Firmware ဆိုတဲ့ဖိုင်နေရာမှာကိုယ်တင်ချင်တဲ့
UPDATE.APP ကိုထည့်ပေး … အောက်ကတစ်ကြောင်းမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတုန်းကပါလာတဲ့
စာသုံးဖိုင်ထဲက WH62406270ML01Ver1003(SmartPhone) ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်
ပြီးတာနဲ့ NEXT ရွေးပေးလိုက်ဗျာ …
ခုဖုန်းကို Downloading mode (Vol + & Vol – & Power) ၀င်ပြီး PC နဲ့ချိတ်ပါ …
PC မှာသိပြီဆိုရင် Scan & Download ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေတော့ …
အားလုံးပြီးလို့ Phone မှာ Ok လို့ပြရင် Battery ဖြုတ် ပြန်ပွင့်လာရင် အဆင်ပြေပါပြီး
samsung ဖုန်းများအတွက်သီးသန့် ဖြစ်ပါသည်။ samsung ဖုန်းမဟုတ်လျှင် မိမိနှင့် အဆင်ပြေတာ
(ODIN 4.38 & ODIN 4.42 တော်တော်များများကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်. ODIN 4.38 & ODIN 4.42 အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တစ်ခြား odin ကိုအသုံးပြုပါ။
1. ODIN Multi Downloader v1.7
အသုံးပြုနိုင်သော version များ
Samsung Galaxy S I9000, Galaxy S I9010, Galaxy S I9010 Giorgio Armani, Samsung Galaxy Tab P1000, Galaxy Tab WiFi P1010
Download ODIN Multi Downloader v1.7
File size: 196.71 KB
2. ODIN Multi Downloader v1.81 and v1.82
အသုံးပြုနိုင်သော model များ- Galaxy Nexus S, Nexus S i9023, Nexus S i9020A, Samsung Galaxy S I9000, Galaxy S I9010, Samsung Galaxy Tab P1000, Galaxy Tab WiFi P1010
Download ODIN Multi Downloader v1.81
File size: 167.59 KB
Download ODIN Multi Downloader v1.82
File size: 168.55 KB
3. ODIN Multi Downloader v1.83
Applicable for models:- Samsung Galaxy S2 Gt-I9100, Galaxy S
File Size : 415.5 Kb.
4. ODIN Multi Downloader v1.85
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ- Samsung Galaxy S II I9100, Samsung Galaxy S II I9100G, Samsung Galaxy S II I9100P, Samsung Galaxy Tab 10.1v P7100, Samsung Galaxy Y S5360, Samsung Galaxy Y S5363, Samsung Galaxy Tab wifi P1010, Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300, Samsung Galaxy Tab10.1 P7500, Samsung Galaxy Tab 10.1 WiFi P7510, Samsung Galaxy Y Pro B5510, Samsung Galaxy Note N7000.
Download ODIN Multi Downloader v1.85
5. ODIN Multi Downloader v3.98
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ- Samsung Galaxy I7500
Download ODIN Multi Downloader v3.98
File size: 193.28 KB
6. ODIN Multi Downloader v4.03
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ- Samsung Behold T919, T939 Behold 2
Download ODIN Multi Downloader v4.03
File size: 167.97 KB
7. ODIN Multi Downloader v4.16
Download ODIN Multi Downloader v4.16
File size: 169.99 KB
8. ODIN Multi Downloader v4.252
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ- Samsung I5800 Galaxy Apollo, Samsung I5700 Galaxy Spica , Samsung I7500 Galaxy
Download ODIN Multi Downloader v4.252
File size: 171.29 KB
9. ODIN Multi Downloader v4.28
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ Samsung i5500 Europa, Samsung I5500, Samsung Galaxy Europa, Samsung Galaxy 551 I5510, Samsung I5700 Galaxy Spica, Samsung I5800 Galaxy Apollo, Samsung I7500 Galaxy,
Download ODIN Multi Downloader v4.28
10. ODIN Multi Downloader v4.34
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ- Samsung i5500 Europa, Samsung I5500, Samsung Galaxy Europa, Samsung Galaxy 551 I5510, Samsung I5700 Galaxy Spica, Samsung I5800 Galaxy Apollo, Samsung I7500 Galaxy
File size: 174.33 KB
11. ODIN Multi Downloader v4.38
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ- Samsung Galaxy Mini S5570, Galaxy Fit S5670, Galaxy Suit S5670, Galaxy Ace S5830
File size: 174.59 KB
12. ODIN Multi Downloader v4.42
အသုံးပြုနိုင်သောmodel များ- Samsung Galaxy Gio S5660, Samsung Galaxy Mini S5570, Samsung Galaxy Fit S5670, Samsung Galaxy Ace S5830, Samsung Galaxy Xcover S5690, Samsung Galaxy Y Pro B5510 , Samsung Galaxy Pro B7510, Samsung Galaxy M Pro B7800
Download ODIN Multi Downloader v4.42
File size: 324.38 KB
Samsungဖုန်းမဟုတ်သောဖုန်းများနှင့် အခြား samsung ဖုန်းများသည် ODIN Multi Downloader v4.38 or ODIN Multi Downloader v4.42 ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါသည်.။
>>>>> Firmware Download <<<<<
၁။ဒေါင်းထားတဲ့ Zip ဖိုင်လေးကိုဖြည်လိုက်ပါဗျာ
၂။ဖြည်လိုက်တဲ့ Zip ဖိုင်ထဲကမှ ResearchDownload_R2.9.7002 ဆိုတဲ့
၃။ Bin ဖိုင်လေးထဲကို ထပ်ဝင်လိုက်ပါ။အဲထဲကမှ ResearchDownload.exe
ဆိုတာလေးကို Run လိုက်ပါ။
၄။ ResearchDownload_R2.9.7002 လေးနဲ့ ဘောက်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီထဲကမှ Load Packet ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါ၊( Load Packet ပေါ်အောင် စက်သွားလေးကို မောက်လေးနဲ့ ထောက်လိုက်ပါ)
၅။Open ဆိုတဲ့ဘောက်လေးတစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ်။အဲဒီ Open ဘောက်လေးထဲမှာ Look in မှာ ခုနက ဒေါင်းလိုက်တဲ့ Zip ဖိုင်ထဲကမှ 220T root
ဆိုတဲ့ ဖိုင်ထဲကမှ 220T ROOT.pac ဆိုတဲ့ ပက်ဖိုင်လေးကိုရွေးပြီး Open လိုက်တော့ဗျာ ။ ။ ။အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါဗျာ…
၆။Play ပုံလေးကို အရင်နှိပ်လိုက်ထားလိုက်ပြီးခနထားလိုက်ပါ။
၁။ဖုန်းကို Battery ကို5Seconds လောက်ဖြုတ်လိုက်ပါ။
၂။ဖုန်ကို Battery ပြန်တပ်ပြီးတော့ Volume Down ( – ) ကိုဖိထားပြီးတော့ ကြိုးထိုးလိုက်ပါ
၃။ Driver ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့ ResearchDownload မှာ အလုပ်စလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
(တကယ်လို့ဒီမှာ Driver မသိဘူးဆိုရင် Y220 Root ထဲမှာပါတဲ့ SPD Driver ထဲက DPInst.exe ကို
၄။ပြီးရင် Research Download မှာ Passed လို့ အစိမ်းရောင် လေးနဲ့ ပြရင်တော့ Stop ပုံလေးကိုနှိပ်ပါ။
Battery ကိုခနပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ Battery ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ ဖုန်းကို Power
မှတ်ချက်။ ။ Tool တွေက သူ့နည်းလေးနဲ့သူပါ တစ်ခုကို သုံးတတ်ရင်နောက်တစ်ခုကိုလည်းသုံးတတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်..
Model များစွာ မှာ အသုံးပြုနည်းများစွာဖြင့် Tool လေးတွေရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ အရမ်းမများပါဘူး လိုင်းမကောင်းတာကြောင့်ပါ
ကျန်သေးသော နည်းလေးများအားလည်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်..
လိုင်းအခြေအနေကြောင့် အနည်းအကျဉ်းပဲ ဖြစ်သွားခဲ့တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး ..နောက်ပြီးသက်ဆိုင်သူအားလုံးကို Credit ပေးပါတယ်...
ဆရာတစ်ယောက်မဟုတ်ပါနော် နည်းပညာလောကထဲစ၀င်လာကတည်းက ကျွန်တော် ဒီလိုမျိူး အစီအစဉ်လေးလုပ်ခဲ့တာပါ .. အားလုံးကကျွန်တော့်ဆရာတွေပါ
ကျွန်တော့်ထံသို့ မေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ Mobile နည်းပညာများ( မနက် ၉ မှ ည ၉ နာရီထိ) မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သိသလောက်ကို ဖြေပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ....
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ကို Message နဲ့ပို့ပြီးမမေးဖို့ အထူးပြောလိုပါတယ် .ဖုန်းဆက်ပြီးသော်လည်းကောင်း မေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ (only voice call
& Email )မအားတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်မည်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်,အကယ်လို့ ဒီိပိုစ်က ရလဒ်လေးတွေကြောင့်အဆင်ပြေလို့ နောက်ထပ်ဒီလိုများများတင်နိုင်အောင် Supply
ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မည်သည့်ငွေဖြည့်ကဒ်မဆို(Gဆို G လို့ရေးပေးပါ :D) ပေးပို့ပြီး ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Welcome From My Blog
Welcome From My Facebook Group
Welcome From My Facebook Page
Facebook မှာ ကျွန်တော်နဲ့ Friend ဖြစ်ချင်သူရင်ဒါလေးကို နှိပ်လိုက်နော်..ဟဲ့ဒါကိုဆို.. :P
ဒါနဲ့ FacebookA/C မရှိဘူးဆို ကြိတ်မှိတ်ခံစားမနေနဲ့ ဒါကိုနှိပ်လိုက်နော် ... Ok...
Mp Download Links (7Links )
အောင်မြင်ရန် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
iOS Device ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျသ်ကျင်ကိုင်တွယ်ကြရအောင...
Android ဖုန်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ Viber Version -Vib...
Y523-L076,Android 4.4, EMUI2.0，V100R001CHSC01B021 ...
G616-L076,Android 4.3,Emotion UI ,V100R001CHSC01B0...
C8817D,Android 4.4,Emotion UI 2.3,V100R001C92B262 ...
C8813_Service Manual and Diagrams.pdf
C8950D_Service Manual and Diagrams.pdf
Flashtool Firmware ထဲမှ Logo.binကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ြ...
Mobile Service လောက တစ်ခုလုံးဆီသို့>>>>>>
မိတ်ဆွေ ယခုပို့စ်ကို ဖတ်ပေးပါ...(4.11.2015)
zawgyi font -32bit-64bit install Myanmar Font For Pc
ဒသန ဆန်ဆန်နေထိုင်နေသူများအဖို့ အားဆေးတစ်ခွက်...
ဟုတ်ကဲ့ ယခုပို့စ် ကိုဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်...
မှတ်ချက်။ ။ယခုပို့စ်ကို Mobile Service ကို စိတ်ဝင်...
Free ခေတ်မကုန်သေးခင်မှာ Free Software လေးတွေသုံးထာ...